> Resource> Alternatives> CopyTrans Alternative na Mavericks: Jikwaa Data on iPhone / iPad / iPod aka
CopyTrans bụ a data management ibu maka Apple ngwaọrụ, na-enyere ị nyefee iPod na iPhone data azụ iTunes na PC. Ọ bụ nnọọ ewu ewu. N'ụzọ dị mwute, CopyTrans nanị na-agba na Windows. Ọ pụtara na, ọ bụrụ na ị chọrọ jikwaa gị iPhone, iPod aka ma ọ bụ iPad na Mac OS, karịsịa ndị ọhụrụ Mavericks, ị ga-ahụ a CopyTrans-dị ka software. E a ukwuu too CopyTrans ọzọ na Mavericks - na Wondershare TunesGo (Mac), nke ejiri gị iPhone, iPod aka na iPad ọma.
Part 1. Gịnị na CopyTrans Mavericks ọzọ karịrị echiche
Part 2. Olee otú iji CopyTrans ọzọ na Mavericks
Part 1. Gịnị na CopyTrans El Capitan ọzọ karịrị echiche
N'okpuru ebe a bụ salient atụmatụ na-agwa gị ihe mere CopyTrans ọzọ na-agba ọsọ ọhụrụ Mac OS X Maveticks.
1 Pịa nyefee music on iPhone, iPod aka na iPad ka iTunes Library na Fim, skips, igwu egwu na-adabere, na ndị ọzọ Ama.
Export music, foto na vidiyo si iPhone, iPod aka na iPad ka Mac na obi ụtọ.
Tọghata ọ bụla ọdịyo na vidiyo na iPhone, iPod aka na iPad enyi na enyi formats.
Ike ọhụrụ listi ọkpụkpọ na foto albums na iPhone, iPad na iPod aka.
Hichapụ music, video na foto na iPad, iPod aka na iPhone na ogbe.
Mma n'anya na mfe interface na enyi na enyi ahụmahụ.
Ofụri Esịt dakọtara na Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10.10, 10,9, 10,8, 10.7, 10.6 na-arụ ọrụ nke ọma na iPhone 6s (Plus) / 6 / 5s / 5c / 5, iPod aka 5, iPad ikuku, iPad Obere na Retina ngosi, na ndị ọzọ.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị a Windows onye ọrụ, na Wondershare TunesGo (Win) ga-izute gị niile mkpa nke ukwuu. Na o nwere ihe ụda atụmatụ karịa Mac version. Ka ihe atụ, Windows version-enyere gị aka na kọntaktị na SMS, MMS, iMessages e wezụga music, foto na vidiyo.
Ihe ị ga mkpa: ihe iPhone, iPod aka ma ọ bụ iPad, ihe Apple eriri USB, a Mac na kọmputa na software.
Nzọụkwụ 1. Wụnye na-agba ọsọ ahụ CopyTrans ọzọ maka Mavericks
Mgbe echichi, na-agba ọsọ CopyTrans ọzọ maka Mavericks. Jiri Apple eriri USB jikọọ gị iPhone, iPod aka ma ọ bụ iPad ka Mac. Ozugbo njikọ dị ihe ịga nke ọma, software ga-akpaghị aka ịchọpụta gị iPhone, iPod aka ma ọ bụ iPad ma na-egosi ya zuru ezu Ama na isi interface.
Nzọụkwụ 2. Jikwaa music, videos na foto na iPhone, iPod aka ma ọ bụ iPad
Na ekpe sidebar na-depụtara Music, Videos na Photos. Site na ịpị ha karị, unu na-abanye kwekọrọ ekwekọ music, video na foto management window.
1.Manage music: ịgbakwunye, bupu, ihichapụ
Ke isi interface, ị pụrụ ịhụ 3 buttons na ala akara. Ha na-na na mkpirisi n'ihi na ị na mbupụ music ka Mac na iTunes na tọghata na ibu music. Mgbe software bupu music ka Mac na iTunes, ọ ga-skips na songs ẹdude na Mac ma ọ bụ iTunes Library na mbupụ ndị ọzọ.
Iji jikwaa music, ị nwekwara ike pịa Music ke ekpe sidebar. Na music management window, ị nwere ike itinye, ihichapụ songs, ma ọ bụ mbupụ na songs na Mac ma ọ bụ iTunes Library.
2.Manage videos: tinye, ihichapụ, bupu
All videos na ị nyefee ma ọ bụ download na-categorized na Movies, iTunes U, pọdkastị, na tiivi nakwa na Music videos. Họrọ a ụdị na-egosi videos na ya. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ibu ma tọghata vidiyo ma ọ bụ mbupụ ha ka ha Mac nke na-ekiri.
3. Hazie igwefoto Roll, Photo Library na Photo Stream
Igwefoto Roll: Ị nwere ike ihichapụ photos na ogbe ma ọ bụ ma ọ bụ bupu foto Mac. The Photo Stream: Ị na-ekwe ka ịdọrọ na dobe foto Mac. The Photo Library: Ị na-enwe ike mbubata, bupu ma ọ bụ ihichapụ foto.
Olee otú iji tọghata MTS Videos na Aiseesoft MTS Ntụgharị
Turbo.264 Alternative maka Windows: A More Advanced All-na-otu Video Ntụgharị